Xiaomi Mi CC9 Pro waa rasmi: qaababka, qeexitaanada iyo qiimaha | Androidsis
Xiaomi Mi CC9 Pro oo la filayo waa halkan, Taleefan casri ah oo waxqabadkiisu dhexdhexaad yahay oo wax badan la soo bandhigi karo, iyo qaybtiisa sawir qaadista oo ay weheliso batteriga ay gudaha ku xajisatay ayaa ah labada qodob ee aadka u taagan.
Haa way tahay. Nidaamka kaamirada ee terminalkan cusubi adeegsado waa mid cajiib ah, badanaa sababta oo ah dareenka ugu weyn ee keena, taas oo ah 108 megapixel Samsung ISOCELL Bright HMX. Awoodda batteriga ayaa sidoo kale weyn; Xaqiiqdii, waa tan ugu sarreysa aaladda Xiaomi illaa iyo hadda, sidaa darteed is-maamulka ay bixiyaan taleefannada casriga ah waa laga masayr yahay, in la yiraahdo ugu yaraan ... Laakiin waxaan ka wada hadli doonnaa waxaas oo dhan iyo in ka badan oo hoose.
1 Tilmaamaha iyo qeexitaanka Xiaomi Mi CC9 Pro
Tilmaamaha iyo qeexitaanka Xiaomi Mi CC9 Pro
Waxaan ku bilaabi doonnaa ka hadalkaaga shaashadda, taas oo ah 6.47 inji iyo farsamada AMOLED. Way cadahay in shirkadu aysan rabin inay hoos u dhigto kharashka ku baxa qaybtaan, waana sababtaas sababta ay ugu hirgelisay aqristaha faraha ka hooseeya galka nidaamka furaha, sida caadiga ah caadada. Xalka ay bixiso waa FullHD + oo ah 2,340 x 1,080 pixels iyo, sida aad si fiican ugu cadeyn karto sawiradeeda rasmiga ah, waxay leedahay qaanad yar oo ah qaab biyo dhac jilicsan iyo jajab aad u yar oo siinaya taabasho heer sare ah muuqaalka Mi CC9 Pro.
Processor-ka mas'uulka ka ah inuu sameeyo dhamaan qeybaha si habsami leh ugu dhex dhaqaaqa bartan-dhexe waa mid horey loogu soo sheegay aaladda sidoo kalena laga helo mobilada kale maanta, inkasta oo ay yar yahiin, maadaama ay cusub tahay. Waxaan si cad u tixraacaynaa Snapdragon 730G, Chipset-ka 8 nm iyo 2.2 GHz ee ugu badnaan saacadda soo noqnoqda ee maanta toos ula tartanta cusub Mediatek Helio G90 y Kirin 810 ka yimid Huawei. Si loo haysto shirkadda Chipset-ka, 6/8 GB oo ah LPDDR4 RAM iyo 128/256 GB UFS 2.1 ayaa la heli karaa.
U dhaqaaqida barta kamaradaha, waxaa jira waxyaabo badan oo laga hadlayo. Marka hore, kicinta ugu weyn ee horseedda qaybteeda dambe ee sawirka waa 108 MP. Furitaanka uu soo bandhigay dareemahan sawir qaadaha ah, oo ah midka aan kor kusoo xusnay Samsung ISOCELL Bright HMX, waa f / 1.7, marka muuqaalka dhalaalka ee ay qabato waa mid aad u wanaagsan wuxuuna bixiyaa sawirro muuqaal leh dhalaal wanaagsan iyo faahfaahin. Fiidiyowyada, waxaa lagu lammaaneeyey xasilinta indhaha 4-dhidibka ah, taas oo ka dhigaysa dhaq-dhaqaaqa qulqulaya duubista fiidiyowga gebi ahaanba la tirtiray. Sidoo kale waa in la ogaadaa in, marka loo eego, kaliya ay qaadato 27 sawir oo sawir ah, laakiin waxaa loo dejin karaa inay qaadato 108 sawir oo MP ah iyadoo si fudud loo dhaqaajinayo doorashadan; Tan waxaa loo sameeyaa si loo badbaadiyo booska xusuusta ROM-ka maxaa yeelay 108-ka sawir ee MP-ga ah aad ayey u culus yihiin, waxayna si fudud uga badan karaan 20 MB miisaan ahaan.
Afarta dareemayaal ee la socda midka ugu weyn waa telephoto 12 MP ah oo leh 2X optical zoom iyo f / 2.0 aperture, 5 MP telephoto oo leh 5x optical zoom iyo f / 2.0 aperture, 20 MP xagal aad u ballaaran oo leh fur f. 2.2 iyo ballaca 117 °, iyo mid kale oo 2 MP ah oo loogu talagalay sawirada makro; waxaas oo dhami waxay ku lammaansan yihiin laba laydh LED ah. Kaamirada hore, dhanka kale, waxay leedahay xal 32-megapixel leh f / 2.0 aperture waxaana lagu habeeyay tiknoolajiyada Super Pixel.
Marka la eego waaxda ismaamulka, mahadsanid 5,260 mAh baytariga Kuwaas oo uu ku faano Xiaomi Mi CC9 Pro cusub, aaladda waa la shidi karaa waana la shaqeyn karaa qiyaastii laba ama seddex maalmood celcelis ahaan iyadoo la adeegsanayo istaandarka si fudud Tani waa dhibic aad u wanaagsan, laakiin wixii la yiri waa inaan ku darnaa taageerada kuleylka degdegga ah ee batteriga uu leeyahay, taas oo ah 30 watts. Sida laga soo xigtay soo saaraha, terminaalka waxaa lagu soo oogi karaa 0% ilaa 100% kaliya 65 daqiiqo.
Oo maxaa ku saabsan software-ka? Hagaag, halkan Xiaomi sidoo kale wuu istaagay, hirgalinta MIUI 11 warshaddii hore mobilka, nooca ugu dambeeya ee lakabkiisa shaqsiyeed ee aalado kooban uun horey u haystaan ​​oo aan aduunka oo dhan ka jirin.
Qalabkan ayaa lagu dhawaaqay laguna bilaabay Shiinaha, laakiin waxaa loo heli doonaa iibsasho halkaas laga bilaabo Nofeembar 11, inkasta oo iibkeeda horeba ay bilaabatay. Suuqyada kale waxay sugayaan inay helaan. Waxaa lagu heli doonaa cagaar, caddaan iyo madow (Magic Green, Ice Aurora iyo Phantom Black, siday u kala horreeyaan). Qiimahoodu waa sida soo socota:
My CC9 Pro 6GB RAM + 128GB ROM: 2.799 yuan (qiyaastii 360 euro).
Mi CC9 Pro 8GB RAM + 128GB ROM: 3.099 yuan (qiyaastii 400 euro).
My CC9 Pro 8GB RAM + 256GB ROM: 3.499 yuan (qiyaastii 450 euro in la beddelo).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Xiaomi Mi CC9 Pro wuxuu si rasmi ah u noqonayaa kamarad 108 MP penta ah iyo in ka badan 5000 mAh oo batari ah
Khariidadaha Google waxay soo bandhigayaan tuuryo loo adeegsado si dhakhso leh